सोमवार अघि कोरोना वीमा गरेकाले १ लाख नै पाउँछन्, अब भने २५ हजार मात्र ! - Arthapage
सोमवार अघि कोरोना वीमा गरेकाले १ लाख नै पाउँछन्, अब भने २५ हजार मात्र !
मुना कुवँर /नयाँपत्रिकाबाट
अब १ लाखको कोरोना बिमा गर्नेले बिमांक बराबर होइन, जम्मा २५ हजार रुपैयाँ लिएर चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । बिमा समितिले आइतबार कोरोना बिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितलाई २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गर्ने नियम बनाएको हो । त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नेले अधिकतम् ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थात्, कुनै बिरामी अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा २० हजार खर्च भयो त्यति मात्रै दाबी भुक्तानी गर्नेछ । ५० हजारको बिमा गर्नेले अधिकतम साढे ३७ हजार र १ लाखको बिमा गर्नेले ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्नेछन् । जबकि, यसअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेबित्तिकै जतिको बिमा गरेको हो, त्यति नै रकम संक्रमित वा परिवारलाई दिने व्यवस्था थियो ।
गत वैशाख पहिलो सातादेखि सञ्चालन गरिएको कोरोना बिमा योजनामा बिमित संक्रमित हुनेबित्तिकै नगद प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । तर, पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि समितिले आइतबार कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन गर्दै राहत रकम र अस्पताल भर्ना खर्च मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार संक्रमितले दाबी भुत्तानी पाउने प्रक्रियालाई झनै जटिल बनाइएको छ । होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले राहत रकमका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अभिलेखका साथै स्थानीय निकायको सिफारिससमेत पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अस्पतालमै उपचाररत संक्रमित बिमितले भर्ना तथा डिस्चार्ज भौचर पेस गर्नुपर्नेछ ।
कोरोना बिमाको राहत तथा अस्पताल भर्ना खर्च लिन संक्रमित आफैं बिमा कम्पनीहरूमा जानुपर्ने भएको छ । समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गर्दै संक्रमितलाई मात्रै दाबी भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरेको हो । संक्रमितको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्रै इच्छाएको वा कानुनी मान्यता पाएको नातेदारले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ ।
यसअघिको व्यवस्थामा संक्रमितको परिवारले कम्पनीमा दाबी भुक्तानी पाउँथ्यो । यसअघि बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले कोरोना संक्रमितलाई पौष्टिक आहारको आर्थिक सहयोग हुने भन्दै संक्रमणलगत्तै रकम दिने गरी कोरोना बिमा सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेका थिए । तर, अब भने बिमित संक्रमणमुक्त भएपछि वा मृत्यु भएपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
त्यस्तै, अब बिमा गरेको एक महिनासम्म संक्रमित हुनेले दाबी भुक्तानी नपाउने भएका छन् । यसअघि १५ दिनसम्म संक्रमित भए कोरोना बिमा लागू नहुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बिमित विदेश गएको छ भने फर्किएको एक महिनासम्म बिमाले काम नगर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसअघि त्यसमा पनि १५ दिनको व्यवस्था थियो ।
बिमा समितिले यसअघिदेखि नै कोरोना संक्रमितले दाबी भुक्तानी नदिन कम्पनीहरूलाई उक्साउने गरी नीतिहरू परिमार्जन गर्दै आएको छ । यसपटक समेत गरी समितिले पाँच महिनामा तीनपटक पोलिसी संशोधन गरिसकेको छ । तर, बिमा समितिका विज्ञ भोजराज शर्मा भने परिवेशअनुसार पोलिसी परिवर्तन हुँदै जानु स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । बिमा समितिले पहिला बिमांक रकम दिने भनेर बिमा पोलिसी सञ्चालन ग¥यो, अहिले राहत र उपचार खर्च दिन्छु भन्नु ठगी होइन र रु भन्ने प्रश्नमा विज्ञ शर्माले भने, ‘हिजोका दिनमा बिक्री भएका पोलिसीमा कुनै परिवर्तन हुँदैन, नयाँ पोलिसीका बारेमा मलाई थाहा छैन ।’
अर्कातिर, अब एकजना मात्रैले कोरोना बिमा नै गर्न नपाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ । अबदेखि जारी हुने पोलिसी परिवार र संस्थागत मात्रै हुने र अवधि आगामी असारसम्मको मात्रै हुनेछ ।
कोरोना बिमा बन्द गर्दै बिमा कम्पनीहरू
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले धमाधम कोरोना बिमा पोलिसी बिक्री गर्न बन्द गर्न थालेका छन् । संक्रमितको संख्या बढेपछि कम्पनीहरू पछाडि हटेका हुन् । परिवारको बिमा गर्न खोज्दा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले बिमा नगर्ने बताएको काठमाडौंका चित्रबहादुर केसीले बताए । ‘मैले परिवारको नै कोरोना बिमा गर्न खोजेको हो ।
तर, लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले कोरोना बिमा बन्द गरिसकेको बतायो,’ उनले भने । लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विके महर्जनले पनि नयाँ क्लाइन्टलाई बुझाउन नसकिने भएकाले केही समयलाई बिमालेख जारी गर्न रोकेको बताए । उनले भने, ‘बिमा समितिले दिन–प्रतिदिन प्रावधान परिवर्तन गरिरहेको छ । नयाँ मानिसलाई यो बुझाउन पनि सकिँदैन । त्यसैले नयाँलाई रोकेको हो ।’
सोमबारदेखि लागू हुने पोलिसीका विषयमा म भन्न सक्दिनँ स् चिरञ्जीवी चापागाईं, अध्यक्ष, बिमा समिति
तपाईं आफैँले कम्पनीले चाहे भने बन्द गर्न पाउँछन् भन्नुभयो अनि फेरि यो पोलिसी बिक्री गर्न पाउँदैनन् भन्नुभयो । कुरा अलि स्पष्ट भएन नि रु
प्रकाशित मितिः 8:16:29 AM |
Prevबामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफरिस गर्ने सरकारको निर्णय
Nextनागरिक स्वास्थ्यप्रति संधै संवेदनशिल छौं तर अब लकडाउन थेग्न सकिदैन-अब्दुल वाहिद मन्सुरी